Lego 71031 Marvel Studios Collectible Minifigures ယခုထွက်သည်
01 / 09 / 2021 28 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 151 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, မိကျောင်း Loki, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…?
အဆိုပါ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား WandaVision အတွက်ပထမဆုံး minifigures များနှင့်အခြားအရာများယူဆောင်လာသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်များပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
WandaVision, Falcon နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား, Loki နှင့်မည်သို့လျှင် ... နောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်းများဖြစ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြား Marvel Cinematic Universe၊ ဒီပြပွဲအားလုံးမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်၊ သူတို့အားလုံးမှာနေရာတစ်ခုရှိတယ် 71031 Marvel စတူဒီယို.
minifigures ၁၂ ခုကျော်၊ ပထမဆုံး Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား အနည်းဆုံးဇာတ်ကောင်လေးယောက်ပါသော series လေးခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ The Scarlet Witch နှင့် WandaVision အတွက် The Vision မှ The Falcon and the Winter Soldier အတွက် Captain America တွင်အသေးငယ်ဆုံး minifigures များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်လည်းအပိုင်းသစ်၏အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်အသစ်နှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းအသစ်များပါလာသည်။ နှစ်ခုလုံး Throg Alligator Loki သည်သူတို့၏ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုမရ။ အက္ခရာအရေအတွက်တွင်ပါဝင်သည် Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား သူတို့ကိုဒီနေ့စျေး ၀ ယ်သူတွေအားလုံးကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေနိုင်တယ်။
သူတို့ရဲ့တင်းတောင်းအသစ်တွေကို minifigures အသစ်တွေနဲ့ဖြည့်ဖို့မျှော်လင့်တဲ့သူတိုင်းငါတို့ဆီကိုကြည့်နိုင်ပါတယ် ဖြန့်ဝေလမ်းညွှန် အကွက်တိုင်း၌အက္ခရာတစ်လုံးစီရှိပုံနှင့်တစ်ခုစီ၌မည်မျှရှိသည်ဟူသောအဖြေများအတွက် တနည်းအားဖြင့်ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် မင်းဖတ်ဖို့နဲ့အားလုံးမဟုတ်ရင်သူရဲကောင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့မင်းအတွက်ဘဲ။
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို £ 3.49 / $ 4.99 / € 3.99 အတွက်ယခုရရှိနိုင်ပြီးစုဆောင်းရန်အက္ခရာ ၁၂ လုံးရှိသည်။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Swing
LEGO liveblog - 10284 FC Barcelona Camp Nou, recoloured and resized sets၊ Batman Tumbler →